दुई दर्जन केवलकार निर्माणका लागि खर्बभन्दा बढी लगानी हुँदै
काठमाडौं । मनकामना केवलकार निर्माण भएको झण्डै दुई दशकपछि मुलुकमा दुई दर्जन केवलकार थपिने भएको छ । मनकामना केवलकार र चन्द्रागिरि केवलकार जनप्रिय भएपछि अन्य धार्मिकस्थलहरुमा पनि केवलकार निर्माण कार्य अघि बढेको हो ।
दोलखा कालिन्चोक मन्दिरका लागि स्थापना भएको कालिन्चोक केवलकार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ । प्युठानको घण्टीखोलादेखि स्वर्गद्वारी मन्दिरसम्म केवलकार निर्माणका लागि स्वर्गद्वारी दर्शनले निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै बन्दीपुरमा केवलकार सञ्चालनका लागि लगानी जुटाउन थालिएको छ ।
ललितपुरमा पनि केवलकार निर्माणका लाग अध्ययन थालिएको छ । गोदावरीदेखि फुलचोकीसम्म केवलकार निर्माणका लागि सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी र युवा जागरण पर्यावरणीय मञ्चले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैगरी मनकामना दर्शनले कास्कीको पुम्दी भम्दीमा एक किमी लामो केबरकार निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सोलुखुम्बुको लुक्लामा पनि केवलकार निर्माणका लागि सगरमाथा रोपवेले अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्को धार्मिकस्थल देवघाटदेखि मौलाकालिकासम्म केवलकार निर्माणका लागि मौलाकालिका डेभलपमेन्टले अध्ययनको माग गरेको छ । दिव्य दर्शनले मुक्तिनाथ मन्दिर, स्वर्गद्वारी र पाथीभरामा पनि केवलकार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
डोटीको ठूलाकेदार, नुवाकोटको घ्याङफेदी गोसाइँकुण्ड केवलकार, इलाम पाथिभरा दर्शनका लागि पनि केवलकार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । लुक्लादेखि नाम्चेबजारसम्म केवलकार र रोपवे दुवै सेवा दिनेगरी अध्ययन भइरहेको छ ।
त्यसैगरि काठमाडौंको बोहोराटार–नागार्जुन डाँडा जामाचोमा पनि केवलकार निर्माणका लागि अध्ययनको माग गरिएको छ । भक्तपुरको सुर्यविनायकमा लिक सेवा र बुढानीलकण्ठदेखि शिवपुरी डाँडासम्म केवलकार बनाउन त्रिवेणी केवलकारले अध्ययन अनुमति माग गरेको छ ।
मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले ४० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेर मुक्तिनाथको मन्दिरसम्म केवलकार निर्माण गर्ने भएको छ । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले पोखराको विरेठाँटीदेखि कागबेनी हुँदै रानीपौवा मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ८५ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि अध्ययन शुरु गरेको हो ।
हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्वीको आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथमा वर्षेनी आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटक बढ्न थालेपछि तिर्थयात्रीको सहजताको लागि केवलकार निर्माण गर्न लागिएको कम्पनीले अध्यक्ष अरुण कुमारकुमार सुवेदीले बताए ।
निर्माण कार्यमा विघ्नवाधा नआए अबको ५ वर्षमा मुक्तिनाथको दर्शन केवलकार चढेर सहजै गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘अर्को आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने गरी कार्य अघि बढाएका छौं । केवलकार निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ केवलकार दर्शन प्रालिबीच समझदारीपत्रमा यस अघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
८३ दशमलव ६५ किलोमिटर लम्बाइ रहने केवलकारमा ६ वटा स्टेशन रहनेछन् । पहिलो शुरुवाती स्टेशन पोखराको विरेठाँटीमा हुनेछ । त्यसपछि घोरेपानी, तातोपानी, लेते, मार्फा, कागबेनी र मुक्तिनाथ स्टेशन रहनेछ । करिब डेढ दशकपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा हालसम्मकै लामो केवलकार निर्माण गर्न लागिएको हो ।
https://www.corporatenepal.com/2018/10/92279/ ७ कार्तिक २०७५, बुधबार
मनकामना दर्शन प्रालिले दक्षिणकाली मन्दिरमा केवलकार निर्माण अघि बढायो
कालिञ्चोक केवलकार तिहार अघिनै सञ्चालनमा आउने, टिकटदर निर्धारण गर्न बाँकी
चन्द्रागिरि केबलकार दशैं विदाका सबै दिन संचालन हुने
केबलकारले मजदुरलाई रोजगारी दिने
वाणिज्य बैंकहरुलाई भारतीय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन राष्ट्र बैंकले बाटो खोल्यो
‘अयोध्या ! ओलीको उट्पट्याङ शैलीको उपज होइन्, कुर्सी जोगाउने अस्त्र हो’
परराष्ट्रले हतारिएर विज्ञप्ति निकाल्यो, पहिला अयोध्याबारे यथार्थ खोजी हुनुपथ्र्योः डा. पोखरेल
परराष्ट्रले गर्यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा, प्रमको अभिव्यक्ति राजनीतिक नभएको दावी
कोरोना रोकथाम कोषका लागि सूर्य नेपालको एक करोड आर्थिक सहयोग
ट्राफिक प्रहरीले हराएका २५ वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई बुझायो
ज्योति पाण्डे फेरि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सीईओ
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीईओमा चंकी क्षेत्रीको पदावधि ४ वर्ष थप